AKHRISO:- Musharixiinta Galmudug oo soo saaray todob qodob oo shuruud u ah in ay ka qayb galaan Doorashada ka dhacay Dhuusamareeb. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Musharaxiinta Madaxweynaha Galmudug ee xulafada ah ayaa war murtiyeed ay soo saareen waxaa ay kaga hadleen hannaanka doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo sida ay suurta gal ku noqon karto in ay ka qeyb galaan.
Musharaxiinta oo kala ah Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa, Cabdullaahi Faarax Wehliye, Kamaal Daahir Xasan Gutaale iyo Cabdi Dheere ayaa shuruud ku xiray ka qeyb galka doorashada, waxaana ay ku baaqeen in la iska kaashado sidii Galmudug uga dhici laheyd hal doorasho, iyadoo loo howlgalayo in la xaliyo khilaafyada iyo is mari waaga wajiyada kala duwan leh.
Sidoo kale Musharaxiinta ayaa soo jeediyay in la sameeyo Guddi cusub oo doorashada ah oo ay ku mideysan yihiin dhammaan dhinacyada kala duwan oo ay doorashada khuseyso, si wada ogol la isla meel dhigo jadwalka iyo habraaca doorasho.
Waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka Ahlusunna uu qeyb ka noqdo hanaanka dhismaha maamulka Galmudug si loo xaliyo dhibaatooyinka ka taagan.
Previous articleDhul gariir ay ku dhinteen dad badan Kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ku dhuftay Turkiga.
Next articleMaxaad kala socotaa Dhaqaalaha Mareekanka uu Kenya ku siiyo la dagaalanka Alshabaab “Lacag aan caadi ahayn”.